Ny orinasanao dia afaka miseho ao amin'ny Apple Maps noho ny Maps Connect | Vaovao IPhone
Na eo aza ny fanaparitahana ny Google Maps sy ny olana voalohany an'ny Maps (izay efa roa taona ary mbola eo amin'ny tontolo iainana), ny fampiharana an'i Apple dia manana potika lehibe satria napetraka amina fitaovana an-tapitrisany sy amin'ny karazany rehetra: iPhones iPads sy Macs. Fantany izany mety ho izany, Apple dia tsy nijanona namaha olana hatramin'ny nanombohan'ny Maps, ary nanitatra ny fampahalalana azo jerena ao anatin'ilay fampiharana, ary koa ny fandrakofana ny sarintany 3D, ny mombamomba ny fifamoivoizana sns. Handeha dingana lavitra kokoa, Apple dia vao nandefa Apple Maps Connect, pejy iray hampidirana ny orinasanao ao amin'ny Apple Maps ary hanome azy dokambarotra bebe kokoa. Ary ny tena zava-dehibe: afaka tanteraka.
Any Etazonia ihany no misy (amin'izao fotoana izao)Amin'ny alàlan'ity pejy ity, amin'ny fomba tsotra sy maimaim-poana, azonao atao ny mampiditra ny orinasanao amin'ny fampiharana, ary tsy ny toerana misy azy ihany, fa ny fampahalalana momba azy io. Haingana ny fizotrany ary ny famaritana dia atao amin'ny fotoana tena izy, amin'ny alàlan'ny antso an-tariby na mailaka saika eo no ho eo, fa ny fotoana mandra-pivoahan'ny orinasa amin'ny fampiharana dia lava kokoa, manodidina ny herinandro.
Ny zavatra voalohany hijerena dia ny asanao tsy miseho intsony amin'ny Maps, zavatra azo atao hatrizay, araka ny efa nolazainay efa ela, Apple dia nanampy vaovao amin'ny fampiharana azy. Raha sanatria ka tsy hita io dia hanondro ireo dingana hampiarahana ny fampahalalana rehetra. Anisan'izany ny Appel ny fahaizana manampy sarintany anaty trano orinasa miaraka amin'ny fanampian'ny teknolojia iBeacon, saingy tsy maintsy mahafeno fepetra takiana vitsivitsy ianao: fitsidihana mihoatra ny 1 tapitrisa isan-taona ary manokatra WiFi manerana ny trano.
Ny fampidirana ny orinasanao amin'ny Maps dia tsy midika fotsiny hoe hiseho amin'ny fampiharana anao izy io, fa ho afaka hiditra avy any ivelan'io koa, satria ny manontany an'i Siri na manao fikarohana ao amin'ny Safari dia hanoro hevitra mivantana ireo orinasa tafiditra ao amin'ny Maps. Safidy tena tsara hanaovana dokambarotra amin'ny raharaham-barotra amin'ny sehatra misy ny mpampiasa an-tapitrisany. Tsy maintsy miandry fotsiny isika izao manitatra any amin'ny firenena hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Afaka miseho ao amin'ny Apple Maps ny orinasanao noho ny Maps Connect
Jabi dia hoy izy:
Folo taona ao aorian'ny Google, fa tsy paoma ramanavy.
Mamaly an'i Jabi
FotoSwipe, fampiharana hizarana sary eo anelanelan'ny iPhone sy Android
Miseho ny fanadihadiana voalohany amin'ny iPad Air 2 sy iPad Mini 3